McKnight wuxuu doortay hal-abuure la xaqiijiyay, wax-ku-ool, iyo isbahaysi dhisme maadaama uu qaadanayo caqabadaha ugu waaweyn ee jiilkan
Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in Tonya Allen ay ku soo biirtay aasaaska madaxweynenimada, laga bilaabo Maarso 1, 2021. Allen wuxuu u yimid McKnight inuu yahay hoggaamiye caan ku ah samafalka, oo uu ugu dambeeyay madaxweyne iyo agaasime guud Hay'adda Skillman Foundation gudaha Detroit. Iyadoo loo diyaariyay cutubkeeda soo socda, Foundation waxay u aragtaa iyada inay si sax ah u tahay qofkii saxda ahaa ee hoggaanka qaban kara inta lagu jiro waqtigan taariikhiga ah. Intii lagu gudajiray masiibo caalami ah, xisaabinta jinsiyadaha qaranka, iyo dhibaatada cimilada, hoggaanka geesinimada leh iyo aragtida fog ee Allen ayaa dardargelin doona horumarka McKnight ee wax ka qabashada qarnigan dhibaatooyinka ugu adag uguna deg degsan.
"Tonya waa hoggaamiye firfircoon oo hal-abuur leh oo ku dhisaya xoogga taariikhda dheer ee McKnight, qiyamkiisa, iyo deeq-bixinta," ayuu yiri Noa Staryk, guddoomiyaha guddiga McKnight. "Daacadnimadeeda, quruxdeeda, iyo rikoorkeeda la caddeeyay, waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa Tonya oo ah hoggaamiye lagu kalsoon yahay, karti leh, saameyn leh oo himiladeenna horay u sii wadi doona." Staryk, oo ah jiilka afraad ee xubin ka ah qoyska muddo dheerna xubin ka ahaa guddiga, wuxuu ku guuleysan doonaa guddoomiyaha hadda ee Debby Landesman bisha Janaayo.
Allen waxay si dhow ula shaqeyn doontaa xubnaha guddiga McKnight iyo hoggaamiyeyaasha — oo madax ka noqon doona dhammaan haweenka, aqlabiyadda dadka midabbada leh ee hoggaanka sare - iyo sidoo kale shaqaale kala duwan oo qiyaastii gaaraya 50. Xulitaankeedu wuxuu daba socdaa raadinta qaran ee ballaaran ee guddiga raadinta aasaaska, oo ay hogaaminayeen xubnaha guddiga Erika L. Binger iyo Ted Staryk. Allen wuxuu badalay Kate Wolford, oo iska casilay xilka madaxweynenimo dabayaaqadii 2019 13 sano kadib.
Maxay Dadku Ka Yidhaahdaan Tonya Allen Ku Biirista McKnight